Dhiigga Ku Daadanaya RAASO - Jigjiga Online
HomeSomalidaDhiigga Ku Daadanaya RAASO
Odhaahda Maanta (Talk of the Town)
Dhibta Raaso iyo Dhiiga Micna la’nta (The bloodshed must stop in Raaso).
Marka hore waxaan aad ugu xumahay arinta noqotay “kugu dhimay kaa dhimay.” Dadka walaalaha ah ee labada dhinacba ka dhintay waa arin laga xumaaado.
Hal bari ka hor ayey ahayd markii DDS madaxdeedu iyo ciidamda Itoobiya bayaaniyeen in la heeshiiyey. Waxaase cad in aanu hashiiskaasi soo afjarin dhibtan mudada dheer aagan ka taagnayd.
Waxa kale oo hadeer aan dhagaystay hadal uu joodiyey hogaanka nababadgalyadu (Dr. Xuseen Qasim). Hadalkiisu sadex qaybood ayuu ka koobanaa (1) tacsi labada dhinacba uu Godoomiyuhu gudbiyey, (2) hawlihii heshiisiinta ee la soo qabtay ilaa hada, (3) digniin uu u digay xoogag aanu cadayn cida ay yihiin.
Fakirada kala duwen ee videowga loogu diray ama lagaga jawaabay hadalka Gudoomiyaha, waxaad ka dareemeysaa laba xoog oo arintani daneeya oo aad u kala fog – waxaad moodaa in aan weli heshiish buuxa la gaadhin,
Hadii aad arintan Raaso ku fiiriso aalada lagu darso mashaqooyinka qabaa’ilka (social conflicts) ama is afgaranshawaaga u dhaxeeya dadka wax wadaaga, dhawr ciladood ayaa kuu soo baxaya heshiisyadii Jigjigja lagu saxeeexay:
1. In aan weli si baaxad leh oo is qancini ku jirto aan loo gudagalin arinta Raaso.
2. Mashaqadani waxay weli taagantahay jaranjarada ama stage ka ah colaad dahsoon oo xoog leh (Latent Conflict). Waana jaranjarada 1aad ee colaadu marto.
Sideedabana sadex Jaranjarooyin oo kale ayaa weli dhiman si loo gaadho nabad waarta (sustainable peace).
3. xoogaga is hayaa waxay isku arkaan in ay u ololaynayaa “xaquuq” ama “rights” sidaas darteedna ay warkooda am information dhincaya kala taageeray fidinayaa. Xili ay isdhageystaan weli lama gaadhin.
Dhinaca xalinta wajigan waxa la rabay in arimahan la tixgaliyo oo jidkan oo kale lagu talaalo:
1. In haya’d ka madax banaan dawlada ay diwaan geliso waxa la isku hayo (dhexdhexaad). Correct data oo unbiased ah.
2. Inta arimaha dhexdhexaadinta la diwaan gelinayo mucaawimo (aid) la gaadhsiiyo dadkan ku tabaaloobay dagaaladan daba dheeraaday.
3. Wacyi galin dhinaca nabadeeynta, in awooda la siiyo dadka deegaanka ah (social empowerment), iyo in la isku tolo marka hore dadka is diidan (coalition building).
Intaasi oo dhani waa hordhaca inta aan la odhan waa la heeshiiyey.
Xataa weli si buuxda umay wada hadlin, waa sida aan maqlayo, dadka dhibtu dhex taalo (stakeholders). Sida muuqata waxa stakeholdersku ayeeyihiin dad kale ayaa gadhwadeeno ka ah wadanhadalada.
Waxa fiicnayd in mudo waafi ah la siiyo dadka is dagaalsani in si ay mudondheer u wada xaajoodaan. Heshiisku hal iyo labo shirtoona kuma hirgalo.
Waxaan isleeyahay, iyada oonan xumaan looga jeedin, in processka la dadajiyey. Peace making ama nabadaytuna waxay col la tahay dagdag iyo natiijo dirqo ah.
Waxa aynu ku arkaynu Raaso waa colaadii dahsoonayd oo qarxaysa isla markaana u diga roganaysa colaad dibada u soo baxda (overt conflict). Xataa weli maynaan gaadhin is-aaminaad ama trust building labada dhinac weli gaadheen
Qaybha dambe ayaan ku soo qaadi doonaa sida loo abaaro colaada qaxda iyo wada hadaladooda oo ka dambeeya mar kale ayaan idin la wadaagi doonaa.
Sikastaba ha noqotee, Dr. Xuseen inta karaankii wuu dadaalayaa. Hase la ogaado in hawl badani weli dhimantahay.